Fialam-boly miaraka amin'ny Flash | Martech Zone
Talata, Desambra 19, 2006 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Sahirana be izao ny asa ankehitriny ary efa eo am-piomanana ny famoahana takiana amin'ny famoahana rindrambaiko sasany aho. Vokatr'izany dia tsy dia mila mitoraka bilaogy loatra aho anio hariva, ka nilalao rakitra tselatra azoko tamin'ny namako iray ary namboariko ho an'ny bilaogiko. Manantena aho fa tianao izany!
Fotoana izao hidirana amin'ny fanahin'ny fialantsasatra! Raha mila kopian'ny fisie orizinaly ho an'ity ianao, Eto mandeha ianao! Misaotra manokana ny namako manan-talenta, Michael, amin'ny fizarana ny fisie Flash!